ZAVA-KENDRENA IRAY AO ANATIN’NY MARO KARAZANA – filazantsaramada
ZAVA-KENDRENA IRAY AO ANATIN’NY MARO KARAZANA
Publié parfilazantsaramada	 mai 2, 2016 Laisser un commentaire sur ZAVA-KENDRENA IRAY AO ANATIN’NY MARO KARAZANA
“Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany.”
(I Korintiana 12:4)
Indraindray ny Baiboly dia mampitaha ny olombelona amin’ny voninkazo, mba anehoana amin’ny fiainana andavanandro fa fohy sy marefo ny fiainana. Azo marihina koa fa, toy ny voninkazo, ny olombelona dia maro karazana. Miseho ho maro karazana izy amin’ny fomba fisehony sy ny toerana ahitana azy. Ary miseho ho maro karazana izy amin’ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay ananany, araka ny asan’ny Fanahy Masina ao anatiny.
Endrey ny hatsaran’ny ray na ny reny iray izay mampita amin’ny taranany ny fampiasana araka ny tokony ho izy ireo fanomezam-pahasoavana izay raisina miaraka amin’ny finoana mahavonjy an’i Jesosy Kristy. Endrey ny hatsaran’ny zanaka izay tia sy manaja, ary manoa ireo ray aman-dreniny. Endrey ny hatsaran’ny mpianatr’i Kristy izay mitory ny Filazantsarany. Toy izao no anambaran’i Paoly azy araka ny tenin’Isaia: “Akory ny hatsaran’ny tongotr’iry mitondra teny soa mahafaly” (Romana 10:15). Misy milaza hoe tsy ny tongony ihany no tsara fa ny tànany koa, ny teniny sy ny sainy. Eny, akory ny hatsaran’ireo izay manao asa am-pitiavana amin’ny anaran’ny Mpamonjy! Akory ny hatsaran’ireo izay mitafy “fitafiana tsara tarehy” (Isaia 52:1). Ny tian’izany ambara dia amin’ny finoana no itafian’izy ireo ny ankanjo fahamarinan’i Kristy.
Endrika iray isehoan’ny hatsaran’ny vahoakan’Andrimanitra ny asa fanompoana izay ataony noho ny fanomezam-pahasoavana maro karazana izay nomen’ny Fanahy Masina azy ireo. Sasantsasany amin’ireo no lazain’i Paoly: “Fa ny anankiray nomen’ny Fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, … ary ny anankiray finoana,… ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-manasitrana” (1 Korintiana 12:8,9), sy ny toy izany. Iray ihany no zava-kendren’ny Fanahy Masina raha mizara ireo fanomezam-pahasoavana amin’ny karazany tena maro samihafa ireo Izy, dia izao: ny Kristiana dia tsy hanao fanekem-pinoana fotsiny fa hitory koa fa: « Jesosy no Tompo” (1 Korintiana 12:3). Endrey izany tombontsoa!
Publié parfilazantsaramada mai 2, 2016 Publié dansUncategorized
FJKM Ankadivoribe Famonjena (SPAA 11)